Zvinoumba uye kupatsanura nekongiri vaiitawo midziyo - China Shandong QianBaidu
Zvinoumba uye kupatsanura nekongiri vaiitawo michina
Zvinoumba kongiri vaiitawo chirimwa
Concrete vaiitawo mudziyo uri simende, uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa., mvura, admixture, admixture nezvimwewo maererano nezvinodiwa nekongiri reshiyo kuyerwa, uye ipapo akamutsa kuva chesamende chisanganiso yakatarwa zvokushandisa, inowanzonzi aizivikanwa kongiri vaiitawo chirimwa (uriri). Concrete vaiitawo mudziyo kunyanya nokuda zvinhu vaishandisa zvokushandisa, zvinhu okuchengetera midziyo, kuyera midziyo, kuvhenganisa midziyo uye kuzvidzora hurongwa nezvimwe zvinoriumba. Kusanganisira zvinhu, uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa., simende, admixture, mvura, yokuvirisa uye zvichingodaro.
Kupatsanura nekongiri vaiitawo michina
(A) na mufambo kupatsanura
1. Mobile vaiitawo chiteshi
Uku chiteshi kazhinji ane zano kufamba, rinogona akatamisira chero nguva, famba zvakanaka. Ainyanya kujairana zvimwe pfupi kana zvikuru Mobile zvirongwa, zvakadai migwagwa, mazambuko uye zvichingodaro.
2. Demolition kusanganiswa chiteshi
Izvi vaiitawo chirimwa iri vakaungana kubva wandei makuru zvinoriumba, inogona vakaungana uye disassembled munguva pfupi, pamwe kuchinjwa kuvakwa yacho. Ainyanya kushandiswa yezvokutengeserana kongiri mafekitari makuru uye svikiro kadikidiki kongiri kuvakwa.
3. Fixed kuvhenganisa uriri
Uyu guru kongiri vaiitawo chirimwa makuru kugadzirwa vanokwanisa, kunyanya kushandiswa yezvokutengeserana kongiri mafekitari, hombe prefabricated chirimwa uye mvura conservancy kuvakwa.
(B) maererano kugadzirwa muitiro kupatsanura
Concrete vaiitawo mudziyo maererano marongerwo muzvigadzirwa kwayo zvinogona rakakamurwa chete-chikuva uye kaviri-Danho mhando mbiri.
(C) dzimwe kupatsanura nzira
Concrete vaiitawo mudziyo kuwedzera pamusoro zviviri inowanzoshandiswa nzira kupatsanura, asi zvichienderana kana configuration kusanganiswa michina uye kuwedzera mvura nokusanganisa kupinda yakaoma zvinhu batching yemapurisa akanyorova vaiitawo chiteshi, maererano kugadzira ari kuramba kudya kusanganiswa michina rakakamurwa kuramba vaiitawo yemapurisa Gap vaiitawo chechitima.
Post nguva: Feb-08-2018